Ma waxaad ka raadineysaa sicirka internetka guriga? Ku keydi qiimahaaga dalabyadan | Wararka Gadget
Qiimaha internetka si loo socdo oo loo kaydiyo
Mar aan fogeyn, xulashooyinka markii la shaqaalaysiiyo internetka aad bay u yaraayeen. Xidhiidhyada ADSL oo gaabis ah oo naga dhigay quus kaliya isku dayga helitaanka bogga. Nasiib wanaagse, shabakadaha internetka ayaa soo hagaagay oo hadda waxay gaareen xawaare gaaraya ilaa 1Gb. Laakiin sida caadiga ah, ikhtiyaarrada badan ee laga kala dooran karo, ayaa ka sii murugsan waa in la helo ikhtiyaarka si dhab ah ugu habboon waxa aan dooneyno oo noo oggolaanaya inaan keydinno. Sidaa darteed, maanta waxaan sameyn doonnaa isbarbardhig u dhexeeya sicirka internetka ee ugu wanaagsan si aad ugu faafiso guriga oo aad u keydiso isla waqtigaas.
Bixinta ugu fiican: Fibre Home 100Mb Liinta
Qiimaha ugu jaban Kaliya fiilada finetwork
Heerka ugu dhameystiran: 100Mb Fiber More Mobile
Heerka ugu wanaagsan ee internetka: Yoigo 100Mb Fibre
Hadda waxaan ognahay in shaqaalaynta internetka guriga aan lahayn go'an, raqiis ah oo aan joogto ahayn ay yihiin xulashooyin run ahaantii jira, waxaa la joogaa waqtigii arrimaha la guda geli lahaa oo si qoto dheer loo falanqeyn lahaa mid kasta oo ka mid ah qiimayaasha ay bixiyaan hawlwadeennada. Diyaar ma tahay?
Movistar wuxuu isku xirayaa 300Mb Movistar 300Mbps € 38 / bishii
Hal Fiber Low 100Mbps € 29.95 / bishii
Vodafone Fiber 300Mb 300Mbps € 30.99 / bishii
Fibre Home 100Mb Liinta 100Mbps € 30.95 / bishii
100Mb Fiber laga bilaabo MásMóvil 100Mbps € 29.99 / bishii
Yoigo 100Mb Fibre 100Mbps € 32 / bishii
100Mb fiber oo leh wicitaanada Jazztel 100Mbps € / bishii
1 Lowi, ikhtiyaarka ku jira Vodafone OMV-kan
2 MásMóvil iyo qiimaheeda qiimaha jaban
3 Qiimaha Fibra ee Guriga Liinta
4 Jazztel iyo qiimaheeda cusub ee fiber
5 300 Mb si aad ula socoto Vodafone
6 Kaliya 100Mb fiber isku dhejisan oo leh Yoigo
Lowi, ikhtiyaarka ku jira Vodafone OMV-kan
Ilaa dhowaan, Lowi wuxuu ka mid ahaa xulashooyinka ugu fiican haddii aan rabno inaan kireysano internet jaban oo leh caymis wanaagsan. Waxay ku shaqeysaa hoosta shabakadda Vodafone, sidaa darteed mooyee inaad ku nooshahay meel aad u qarsoon, waxaad ka faa'iideysan kartaa daboolka fiber-ka dhib la'aan. Qiimuhu waa kaliya 29,95 euro bishii, oo ah heerka fiberka ugu jaban suuqa.
Haddayna qiimuhu u muuqdeen wax yar oo faa iido ah, weli wax badan baa jira. Heerkani ma laha wax waara, markaa waan hoos u dhigi karnaa ama isbeddeli karnaa wakhti kasta anagoo aan ka baqayn ciqaab ama ganaax. Iyaguna lacag nagama qaadi doonaan rakibidda ama amaahda router-ka. Haddii markaad aqriso faahfaahinta heerka fiber-ka Lowi sugi karin inaad guriga kuhesho, waxba ma lihid laakiin marin u hel xiriirkan si aad qandaraas ugu hesho adeeggaaga.
MásMóvil iyo qiimaheeda qiimaha jaban
Hawlwadeenka jaallaha ah ayaa u dhaqaaqay inuu kacdoon ku sameeyo sicirka sicirka. Waqtigan xaadirka ahna, waxay umuuqataa inay ku socoto wadada saxda ah maadama fiberkeeda iyo bixinta ADSL ay kamid yihiin kuwa ugu raqiisan. Kaliya € 29,99 bishiiba waxaan ku raaxeysan karnaa 100Mb fiber iyo wicitaano aan xadidnayn oo khadka taleefanka ah.
Khidmaddan billaha ah ee raqiiska ah looma baahna inaan wax kale ku darno maaddaama rakibidda iyo routerku ay bilaash ku yihiin diiwaangelinta cusub. Laakiin haddii ay tahay inaan ogaano inay heysato 12 bilood oo waara, marka haddii aan rabno inaan beddelno sicirka ka hor dhammaadka muddadan, waa inaan bixinnaa ganaax.Si loo qandaraasloobo ama loo hubiyo daboolka fiber ee MásMóvil, Waxaan kuu daayey xiriiriyehan si aad dhaqso ugu qabato.
Qiimaha Fibra ee Guriga Liinta
Markii aan fiirineynay liistada Orange, waxaan helnay sicirka Home Fiber si aan uga kireysano internetka guriga iyo wax kale. Qiimayaashani waxay ku habboon yihiin kuwa u baahan inay celiyaan sicirkooda moobiil marka laga reebo isku xirnaanta guriga iyo sidoo kale waxay raadinayaan khadka taleefanka ee jaban. Gaar ahaan, waxaa ku jira wicitaano aan xadidnayn oo khadka taleefannada ah iyo sidoo kale 1000 daqiiqo oo loogu yeero mobilada. Iyo qiimahee? Waa hagaag € 30.95 bishii wax walba.
Markaa haddii aan dooneyno fiber leh caymiska Orange, waxaa ugu wanaagsan in aan laga fekerin. Qandaraaskan si dhakhso leh oo fudud uga soo qaad halkan.
Jazztel iyo qiimaheeda cusub ee fiber
Ka dib markii la dhaqay muuqaalkeedii, Jazztel wuxuu soo jeediyay in wax laga beddelo heerarka fiber ee aan qandaraas ku qaadan karno. Iskusoo wada duuboo, haddii sicirka Orange uusan na qancin, maadaama ay ka hoos shaqeeyaan isla shabakad caymis. Haddii ay tahay inaan ku talinno sicir-internet oo keliya ka. Jazztel, mid ka mid ah kuwa ugu fiican ayaa noqon doona sicirka 100Mb ee xawaaraha fiber dusha iyo wicitaanada. Waxaan isticmaali karnaa khadka taleefanka iyadoo aan laga baqaynin inaan kordhino sicirkayaga, maadaama ay sidoo kale kujirto wicitaano aan xadidneyn wakhti kasta iyo hawl wade.
Lacagtaada bil kasta waa 28,95 euro bishii, laakiin hadda nasiib ayaan ku jirnaa. Waxyaabaha maskaxda lagu hayo haddii aan ka fekereyno inaan wax ka beddelno khadka internetka ee guriga. Si aad u codsato macluumaad dheeri ah ama aad qandaraas uga dhigto mid ka mid ah qiimaheeda, uma baahnid inaad sameyso wax kale oo aan ka aheyn marinkan xiriiriyaha.
300 Mb si aad ula socoto Vodafone
Haddii aan dooneyno inaan qandaraas ka siino internetka shirkadaha caadiga ah si looga fogaado dhibaatooyinka xagga caymiska, ma iloobi karno Vodafone iyo fiberkiisa ONO. Waxaan haysanaa dhowr qiimeyn oo aan kala dooran karno, laakiin haddii aan dooneyno in aan waqti badan ku bixinno xawaare internet wanaagsan, heerka ugu wanaagsan shaki la'aan waa Fibre Ono 300Mb.
Waxa ugu fiican ayaa ah in sicirkan uu leeyahay dalab kujira lacagteeda billaha ah muddo 24 bilood ah, taas oo aan kaliya ku bixin doonno € 39, oo keydineysa in ka badan 200 euro. Si aan loo seegin dalabkan, waxa keliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah marin u hel xiriirkan si aad u kireysato hadda.
Kaliya 100Mb fiber isku dhejisan oo leh Yoigo
Maaddaama Yoigo uu soo galay suuqa qiimaha fiber-ka, xulashooyinka dhaqaale marka ay timaaddo shaqaaleynta way bateen. Saddexda qiime ee la bixiyay, annaga waxaan kugula talineynaa midka dhexe oo leh 300Mb, gaar ahaan qiimaheeda iyo xawaareheeda.
Waa inaan maanka ku haynaa in sicirkan wuxuu joogaa 12 bilood iyo ciqaabta ugu badan ee la bixin karo haddii aynaan u hogaansamin waa 100 euro. Ha walwelina, maxaa yeelay diiwaangelinta iyo rakibistu waa bilaash oo wax lacag ah kama bixin doontid qaansheegta fikradahan. Haddii aad xiiseyneyso sicirkan, waxaad si deg deg ah uga kiraysan kartaa xiriiriyahan.
Sidaad aragtay, waxaa jira ikhtiyaarro badan oo aan haysanno markay tahay shaqaaleynta internetka ee guriga. Iyo wixii ka sarreeya, fursado badan oo noo oggolaanaya inaan wax badbaadinno. Hadda oo aad ogtahay dalabyada ugu fiican ee hadda jira ee suuqa ku jira qiimaha internetka, kaliya hadhaagii ugu adkaa. Xulo adeegga aad shaqaaleyneyso. Haddii aadan weli hubin, waxaad fursad u leedahay inaad booqato Roams comparator oo hel waxaad u baahan tahay.